musha > Travel Europe > Europe kuti Top Luxurious Zvitima
Haufaniri kuva Bollywood mutambi kuti chaizvoizvo kuona mukati izvi kunaka, dzinoyevedza nezvitima, asi iwe kuti muenzaniso chikuru zvikuru chiri bimvu mari parutivi kunakidzwa kwavari. Kana uine anenge £ 3, 000+ zvavanongosiya, sarudza kuenda, rongedza zvinhu zvako, uye rega chiitiko ichi cheupenyu hwese chitange! Zvose pamusoro sanganisa ichi muumbozha, nyaradzo, uye yakawanda yakawanda ye yevedza dzinoyevedza mu Europe achakugadzirira chisingakanganwiki ruzivo.
Heinoi anoperekedza Europe vatatu zvikuru dzakakurumbira, dzinoyevedza nezvitima.
Venice Simplon Dzokumabvazuva Express
A chitima kuti akatanga vafambi munyika nechitima kwokunyanyisa shure 1982 ndiyo chete chitima iyo ichiri nhamba imwe sarudzo yevakawanda vekuEurope mufambi uye Anodakadza Zvitima mafeni. saka, kune chero munhu anotarisa kunakidzwa nechitima humbozha husingaenzaniswe, Venice Simplon nokuAsia Express ndiyo nzira yokuita nayo. zvikuru yakakurumbira rwendo izvi kwoumbozha kutiza pakati London uye Venice. zvisinei, zhinji haigoni kurwisa kuenda mberi Istanbul uye Berlin, ne Berlin ari wokupedzisira kwakatangwa chemabhazi nokuti chitima. Paunokwira chitima ichi, une dzimwe chef zvakanakisisa zvenyika kushanda pamusoro zvokudya zvenyu uye kuroorwa uye akagovana Inn kuti vari 5-nyeredzi zvinhu.
Pamwe resitorendi motokari uye mubhedha, pane zvakanaka rine pakapuranga nzvimbo vaenzi ... khm, vafambi. Paunofunga cream the cream pamusoro dzinoyevedza nezvitima, Venice Simplon nokuAsia Express kuripiko pfungwa dzako pakarepo anoenda!
Venice kuti London tikiti kuchaita mari iwe anenge £ 2,700. Pataidzokera anotora dzimwe 16 maawa.
Bolzano kuna Venice Zvitima
Vienna kuna Venice Zvitima
Udine kuna Venice Zvitima
Belmond Royal wokuScotland Luxurious Zvitima
A chitima kuti zvechokwadi anorarama tsika youmambo, Belmond Royal Scotsman ari kurota kuzadzike. Kuva pakati pamusoro 3 dzinoyevedza nezvitima, Belmond akaita music nzira iwe uchaita kuda. izvi zvinosanganisira Scotch mumera Whiskey Trail, Western Scenic Wonders, Scotland raMwari Classic Splendours, Dales Lakes & Gardens, uye nezvimwe zvakawanda. Belmond anozvirumbidza pamusoro Spa mabasa, naizvo! The 4-zuva Highland Classicmost ndiyo inonyanya kufarirwa rwokuparidza. The chitima anomhanya kubva Kubvumbi kuna October, uye vakafukidza vakawanda chose naka yevedza nharaunda, kusanganisira vechiwi Skye. Garai ndokuzorora maererano rakakura magirazi nemahwindo, sveta pane vamwe yakanakisisa waini uye they gush pamusoro kunaka kuti Scotland.
Tikiti mitengo kutanga £ 2,350 pamunhu.
Iyo Goridhe Eagle Danube Express Yakasarudzika Zvitima
Haungambomufungiri kuona Europe nenzira iwe vaifamba pamwe Golden Eagle Danube Express. The chitima prides pamusoro zvinoshamisa dzinoyevedza Inn, Large uye nhaka cabins. Ivo iniwo pokugara akanakisisa resitorendi Lounge mavhiri. By kure chimwe chezvinhu dzinoyevedza nezvitima iwe unenge nokusingaperi akamufambisa Golden Eagle Danube Express zvinowanika 5 kuti 12 nzendo mazuva '. Rinotaura Nhamba dzokugara kusanganisira Budapest, Prague, Zurich, Vienna, Venice, Istanbul, Innsbruck, Sofia, uye zvakawanda. Kunewo zvakawanda nedzimwe dzakasiyana (Tours) kusarudza kubva. All Golden Eagle Danube Express nzendo zvinosanganisira kure-chitima Tours uye zvakaitika.
Tickets nokuti uyu kutanga kubva £ 22.260 nokuda Zvinzvimbo Deluxe Class.
Rwendo rwekuEurope rwunosanganisira Anodakadza Zvitima uye kunakidzwa kwaro chaiko kare, asi rwendo rwekuEurope pane chero eizvi zvitima CHINHU. Tenga tikiti chero yechitima kukwira kunyangwe kubva poindi kuenda kunongedzo nayo Save A Train uye kutanga kunakidzwa Europe.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe unogona pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-luxurious-trains%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#dhura #Yakasununguka #traveleurope raifin Train Travel chitima rwendo